Phones author 1 - March 16, 2020
2020 နှစ်စပိုင်းမှာ Samsung Galaxy Note 10 Series ထဲက စျေးနှုန်းအသက်သာဆုံး ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note 10 Lite ကို တရားဝင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် စမတ်ဖုန်းကိုမှ စျေးနှုန်းအနည်းငယ်သက်သာစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်လို့ Samsung Fans တွေကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာ သေချာပါတယ်။...
Realme ကနေ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Realme XT ကို စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းအားကောင်းလျက် ရှိပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာ ကင်မရာစွမ်းအား အလွန်ကောင်းမွန်သလို ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း မြင့်မားမှုရှိပြီး မျက်နှာပြင် ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ စက်စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မြင့်မားတာကြောင့် ပေးရတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ ထိုက်တန်မှုရှိတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဘက်ဘက်က...
Vivo V15 VS Vivo V15 Pro
Phones author2- March 16, 2020
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Vivo ရဲ့ အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vivo V15 နဲ့ V15 Pro ရဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Vivo ရဲ့ ဒီဇိုင်းအလန်းစားနဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Vivo V15 နဲ့ V15 Pro ဟာ ဘေးဘောင်မပါတဲ့ Bezel-less မျက်နှာပြင်အပြည့်ကို သုံးပေးထားပြီး ရှေ့ကင်မရာအတွက် မြင့်တက်ပွင့်ထွက်လာမယ့်...
Nokia 5.1 က စျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ Budget ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ သုံးနိုင်ပြီး Nano Dual SIM စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 151.1 x 70.7 x 8.3 mm (5.95 x...
Phones author 1 - March 9, 2020
Samsung ရဲ့ Note Series တွေဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note9နဲ့ Samsung Galaxy Note 8 ကို ဒီတစ်ပတ်မှာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Samsung Galaxy Note9ကို အရင်ှSamsung Galaxy Note တွေကထက် ပိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားတာ...
Phones author2- March 9, 2020
Vivo S1 Pro ကတော့ Vivo ရဲ့ အဆင့်မြင့် Pro version ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လို့ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာသုံးနိုင်ပြီး Single SIM နဲ့ Hybrid Dual SIM ဆိုတဲ့ version2မျိုးကို ထုတ်လုပ် ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက...
Samsung ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် budget ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy A50s ကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာသုံးနိုင်ပြီး Single SIM နဲ့ Dual SIM ဆိုတဲ့ version2မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 158.5 x 74.5...
2019 ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Xiaomi Mi Note 10 ဟာ အဆင့်မြင့် features တွေများစွာ ပါရှိတဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား mid-range smartphone တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းမှာ မြင်ကွင်းစွမ်းအားအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အကောင်းဆုံး viewing experience တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ display ပါရှိပြီး ကင်မရာရဲ့ အရည်အသွေးဟာလည်း အလွန်မြင့်မားမှုရှိသလို...
Phones author2- March 6, 2020
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ LG ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် LG အနေနဲ့ Android One စမတ်ဖုန်းလို့ ဆိုနိုင်မယ့် LG G7 One စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ LG G7 Fit စမတ်ဖုန်းသစ်ကို ဒီတစ်ပတ်မှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ G7 လိုမျိုး G7 One နဲ့ G7 Fit Display တို့မှာ Notch...
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ မိုဘိုင်းဈေးကွက်ထဲက နောက်ဆုံးပေါ် iPhone တွေထဲမှာ iPhoneX ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ iPhone XS လည်း ပါရှိပြီး ၎င်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2018 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ 12 ရက်နေ့က စတင် တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် iPhcvone X နဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အရွယ်အစား၊...